"Jesosy Tompontsika … natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika."Romana 4:24,25
"Marina Izy (Andriamanitra) sady hanamarina izay manana finoana an’i Jesosy."Romana 3:26
«Raha marina Andriamanitra, dia handray ahy any am-paradisa. Hitany tsara fa tsy mbola nangalatra aho na namono olona, miezaka manao ny tsara, ary tsara toetra kokoa noho ny olona maro manodidina ahy…»
Raha izany no fihevitrao, dia diso lalana ianao! Eny, marina Andriamanitra, saingy tsy mitsara araka ny fomban’ny olombelona, izay mety hanafaka olona eo amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany kanefa hanameloka azy kosa eo amin’ny fitsarana ambony, na ny mifamadika amin’izany. Fantany ny rehetra momba anao, tsy izay nataonao hita maso ihany, fa ny eritreritrao miafina indrindra ihany koa. Mahalala amin’ny antsipiriany ny fiainanao manontolo Izy. Tsy mampitaha anao amin’ny olona antonintoniny Izy, fa mandanja anao araka ny fenitry ny fahamasinany tsy refesina. Ary satria Izy “madio maso ka tsy te hitsinjo ny ratsy” (Habakoka 1:13), dia tsy afaka handray anao ho eo anatrehany, amin’izao maha ianao anao izao.
Nefa ny fahamarinany tsy milefitra dia miaraka amina fitiavana tsy hita lany, ary raha manambara Izy fa meloka ianao, dia te hamotsotra izany helokao izany koa. Io famotsoran-keloka io dia atolony an’izay rehetra manaiky fa Jesosy Kristy dia nisolo toerana azy ireo, nizaka ny fitsarana sahaza azy ireo. Marina Andriamanitra, ka tsy afaka hampandoa fanindroany ny trosa iray. “Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra” (1 Jaona 1:9).
Koa aoka tsy hanandrana hilaza ny tenanao ho tsy meloka ! Mifanohitra amin’izany aza, mieke ireo fahadisoanao sy ny tsy fahaizanao manao izay marina eo anatrehan’Andriamanitra, ary raiso ny fahasoavana atolony amin’ny alalan’ny finoana an’i Jesosy Kristy. Hohazoniny ny teny fampanantenany hamela heloka anao sy hanome anao fiainana mandrakizay.